Horudhac: Chelsea vs Aston Villa… (Ogow rikoorka liita ee looga fadhiyo Lukaku inuu baabi’iyo caawa) – Gool FM
Horudhac: Chelsea vs Aston Villa… (Ogow rikoorka liita ee looga fadhiyo Lukaku inuu baabi’iyo caawa)
Ahmed Nur September 11, 2021
(London) 11 Sebt 2021. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa dooneysa inay kusoo laabato waddada guulaha kaddib markii ay barbarro 1-1 ah la gashay kooxda Liverpool ciyaarii ugu dambeysay horyaalka inkastoo labo guul ay ku furatay xilli ciyaareedkan.
Blues ayaa caawa kulankeeda afaraad ee Premier League la ciyaareysa naadiga Aston Villa oo ay kusoo dhoweyneyso garoonkeeda Stamford Bridge.
Garsooraha: Stuart Attwell (England)
Chelsea ayaa caawa heleysa weeraryahankeeda Romelu Lukaku kaasoo kabsaday dhaawac balse waxaa seegaya kulankan N’Golo Kante iyo Christian Pulisic.
Thiago Silva ayaa ay suuro gal tahay inuu seego ciyaartan haddii ay FIFA dhaqan geliso ganaaxa la filayo inay saarto xiddigihii xulalkooda u ciyaari waayay maalmihii lasoo dhaafay, halka Reece James uu ganaax ku seegayo ciyaartan kaddib markii casaan loo taagay kulankii ugu dambeeyay Premier League.
Dhinaca kale, Emi Martinez ayaa kulan ka tirsan Premier League seegi doona markii ugu horreysay tan iyo markii uu kusoo biiray Aston Villa isagoo gali doona karaantiil maadaama uu la safray xulkiisa Argentina, waxaana xaaladdaas ku wehliya xiddiga ay labada dhinac ka wada tirsan yihiin ee Emi Buendia.
Leon Bailey, John McGinn iyo Jacob Ramsey ayaa dhammaantood taam u ah kulankan, waxaa sidoo kale soo laabanaya Bertrand Traore.
Chelsea ayaa kaliya hal guuldarro la kulantay 16-kii ciyaarood ee Premier League oo ay garoonkeeda kula ciyaartay kooxda Aston Villa, balse guushii Villa ee maalintii ugu dambeysay xilli ciyaareedkii hore ayaa ka dhigan inay raadineyso inay labo jeer si xiriir ah uga adkaato Blues ciyaaraha horyaalka markii ugu horreysay tan iyo 1993.
Guuldarradii ugu weyneyd ee Aston Villa kasoo gaartay horyaalka Ingiriiska waxaa dusha u saaray Chelsea kulan ku dhammaaday 8-0 kaasoo dhacay bishii December ee sanadkii 2012.
Chelsea ayaa haddii ay caawa adkaato noqon doonta kooxdii labaad ee guuleysata 600 oo kulan oo Premier League ah, waxaana kaga horreeyay darajadan kaliya kooxda Manchester United.
Dhammaan toddobada gool ee ay Chelsea ka dhalisay Premier League xilli ciyaareedkan waxaa kala dhaliyay toddobo ciyaaryahan oo kala duwan.
Romelu Lukaku ayaanan wax gool ah dhalin 14 kulan oo uu ku ciyaaray garoonka Stamford Bridge dhammaan tartammada.
Aston Villa ayaa raadineysa inay dhaliso wax ka badan hal gool kulankii shanaad oo xiriir ah oo ay bannaanka ku ciyaarto horyaalka Premier League iyadoo ay noqoneyso markii labaad oo ay sidaas sameyso haddii ay caawa labo gool dhaliso.
Tan iyo markii Villa ay kusoo laabatay horyaalka sanadkii 2019, Anwar El Ghazi ayaa ah xiddiga goolasha ugu badan horyaalka ugu dhaliyay isagoo 15 gool diiwaanka ku qortay.
Naadiga Aston Villa ayaa saddex gool ku dhalisay kubbadaha joogga sare xilli ciyaareedkan waana kooxda ugu badan horyaalka Ingiriiska.
Horudhac: Manchester United vs Newcastle United... (Cristiano Ronaldo oo safasho rikoor ah sameyn doona maanta & Xogaha muhiimka ah ee ciyaarta Old Trafford)
DEG DEG: FIFA oo go'aan kasoo saartay haddii xiddigaha loo diiday inay xulalkooda Koonfurta Ameerika u ciyaaraan ay u safan karaan kooxahooda toddobaadkan